जबरजस्तीको यातना - Paschimnepal.com
नेपालमा पढ्ने र पढाउने प्रवृती हम्मै बढेको छ । अशिक्षित अभिभावकको बिचार शिक्षित हुनु एकदमै सकारात्मक परिवर्तन हो । यसलाई हामी सबैले दिल खोलेर स्वागत गर्नै पर्छ । तर अनगिन्ती सपनाहरु तुईएर दिनदिनै मृत्यु रोज्न बाध्य सयौ बिद्यार्थीहरुको पिर,ब्यथा कस्ले बुझिदिन्छ?उनिहरुका सपना कसले साकार पारिदिन्छ ?
आफुले चाहेको कुरा,आफुले खोजेको कुरा जब ब्यक्तिले गर्न नपाउदो रहेछ तब ब्यक्ति आफ्नो सारा सपना भोको बाघलाई मिल्काई मृत्यु वरण गर्नसम्म पुग्दोरहेछ।तपाईले आत्महत्या गरेको,देखेको,सुनेको हुनुहुन्छ होला । आधा भन्दा बढी यसैको कारणले भैरहेको छ । मात्र यसले सिकार माथी सिकार गरिरहेको छ।
हामी चाहिँ नतमस्तक छौ,आनन्द्र निन्द्रामा छौ । सिकार हुन दिईरहेका छौ। डाक्टर,ईन्जिनियर बन्दैमा उ महान ब्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा के ग्यारेन्टी छ ? कसले दिनसक्छ ग्यारेन्टी छाती पिटेर ? अर्को कुरा,डाक्टर, ईन्जिनियर बन्दैमा बाउँको नाक राख्छ, आमाको चोलोको टाँक खुल्न दिदैन भन्नेमा के सत्यता छ,के ग्यारेन्टी छ ? के साहित्यकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो बाउको नाक राखेका थिएनन् र ?के नारायण गोपालले गित गाएर आफ्नी आमाको सारी बचाएका थिएनन र? चित्र बनाएर के महान चित्रकार पिकासोले घरबार चलाएका थिएनन् र? “कस्तो निच सोच छ हाम्रो।
उत्तिकै घटिया व्यबहार पनि । गर्नेबेला महान ब्यक्तिका कुराहरु, गराउने बेला पल्ला घरे, वल्ला घरे रामे स्यामेका कुराहरु ? “बाबा म देश चलाउने प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु। त्यसैले राजनीति तिर जान्छु है”हिम्मत गरि हजार चोटिको प्रयास तेसैमा कट्टुमा पिसाब।यसरी भन्दा पनि कि त सुन्नै नसकिने गाली खाईन्छ कि त सहनै नसकिने कुटाई खाईन्छ ।
हाम्रो सोच” एउटा जागिर,ठूलो घर,राम्री स्वास्नी र ब्यान्क ब्यालेन्स”यति नै हो जिन्दगी। जिन्दगीमा पैसा नकमाएर पेट भोक भएछ भने कोई वाद छैन,भिखारिको संख्यामा एक अर्को नाम जोडिने छ।तर माग्दा माग्दै संसार जितेका पुष्कर शाह,कृष्ण धारावासी,थमस एल्बा एडिसन जस्ता दृष्टान्तहरु प्रसस्तै छ्न। “यदि भिख माग्दा कसैलाई खुसी मिल्छ भने किन अरुले भिख नमाग भनी उसको हक छिन्न खोज्नु।” मैले यी सब कुरा भनिरहदा “पढदै नपढ्ने भन्न खोजेको होईन। पढ्ने तर चाहेको बिषय पढ्ने”।”मान्छेलाई खुसी पल्ला घरे रामेले यस्तो गर्यो,स्यामेले यो किन्यो,यस्तो खान्छ भन्ने कुराहरुले पट्टकै प्राप्त हुदैन”।
“ब्यक्तिको कथा लेख्छु भन्ने मान्छेलाई,उपचार गर्न लगाउनु कति सम्म उचित र न्याय हो आफै न्यायाधीश गर्नु?” “पीडामा नपरेर पनि पीडा महसुस गर्ने ब्यक्तिलाई, बलै पिडा दिनु घातक शिवाय अरु केही साबित हुनसक्दैन।”
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २४, २०७४ 2:09:52 PM
Prevनिःशुल्क पञ्चकर्म आयुर्वेद चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा
Nextचिसोका कारण विद्यालय बन्द